Sharuud Luuqadeed oo lagu Xirayo Dadka Doonaya Deganaanshaha Rasmiga ee Sweden
HomeWararka CaalamkaSharuud Luuqadeed oo lagu Xirayo Dadka Doonaya Deganaanshaha Rasmiga ee Sweden
June 23, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Dawladdu ayaa magacawday guddi baaritaan ku sameeya sidii loo meel marin lahaa shuruudaha Luuqada ee aqoonta bulshada si loo helo sharci degenaansho rasmi ah.
“Sweden, bulshadu waxay kugu khasbaysaa inaad ka soo baxdo shuruudo cad,” ayuu yiri wasiirka isdhexgalka iyo socdaalka Anders Egmann oo shir jaraa’id qabtay maanta.
“Qaar badan oo ka mid ah kuwa Sweden yimaadaa waxay bartaan luqadda oo galaan nolosha shaqada, laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaan ka faa’iidaysan ama fursad u helin inay ka mid noqdaan bulshada,” ayuu raaciyay.
“Haddii aadan aqoon luqadda, way adag tahay inaad ka mid noqoto bulshada Iswiidhan,” ayuu yiri Eggman.
Tan iyo Luulyo 2021, qofku waa inuu buuxiyaa shuruudaha awoodda taageerada si uu u helo degenaansho rasmi ah Iswiidhan. Dawladdu waxay hadda soo jeedinaysaa in la adkeeyo shuruudaha oo lagu daro imtixaannada luqadda iyo bulshada.
Dawladdu waxay u xilsaartay baaraha Fredrik Fries oo ka tirsan Maxkamadda Racfaanka ee Stockholm si uu u soo saaro soo jeedinta shuruudaha aqoonta luqadda iyo bulshada. Soo jeedinta ayaa hadhow lagu kaabi doonaa soo jeedino kale oo ku saabsan shuruudaha adag ee jinsiyadda, Eggman ayaa ku dhawaaqay.
Baaraha ayaa soo gudbin doona warbixintiisa ugu danbeysa ugu dambayn May ee sanadka soo socda.
Guddiga baarista ayaa warbixin ka siin doona tallooyinkii hore ee ay soo saareen guddiga loogu yeero “Guddiga socdaalka” ee baarlamaanka. Talooyinka ayaa sheegaya in dadka codsanaya sharciga deggenaanshada joogtada ah ay tahay in ay ka gaareen buundada ugu yaraan heerka C ee luqadda Iswidhishka ee dadka soo galootiga ah (SFI).